Iindaba -I-SWMC 370-DTH yomgubho ongaphantsi komhlaba usetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokwakha
I-SWMC 370-DTH engaphantsi komhlaba kusombiwa kuyo kusetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokwakha
I-SWMC 370 engaphantsi komhlaba yokomba isixhobo sigqibe ngempumelelo iprojekhthi yesiseko seprojekthi yokuthengiswa kwezindlu eGuangzhou, China.
Iprojekthi yokuthengiswa kwezindlu eGuangzhou igubungela ummandla we-62,000 m2, apho i-44,000 m2 ingaphezulu komhlaba kwaye i-18,000 m2 iphantsi komhlaba. Kukho imigangatho engama-25 ngaphezulu komhlaba, kubandakanywa imigangatho emi-4 ngaphantsi kwepodium kunye nemigangatho emi-4 ngaphantsi komhlaba. Ukuphakama okupheleleyo kwesakhiwo yi-108.8m, ubunzulu bomhadi wesiseko yi-16.9m, kwaye indawo yengingqi yi-21.1m. Isakhiwo sobunjineli siyilelwe njengesakhelo sesamente esomeleleyo sekhonkrithi kunye nesiseko siyilelwe njengesiseko se-raft flat.
Ukujonga umphumo wokuchasana nokudada kumgangatho ongaphantsi, iqela le-bolt elichasayo libekwe kumgangatho osezantsi wale projekthi. Ububanzi be-bolt echasayo yi-130mm, isithuba siyi-780mm, kwaye ubunzulu bomngxunya yi-8m.
Ukukhethwa koomatshini bokugrumba kunefuthe elibalulekileyo kwinkqubela phambili egudileyo yesiseko seprojekthi ye-bolt anti-floating.SWMC ekhethiweyo i-SWMC 370 yomatshini wokugrumba isiseko senkampani yokwakha, ehambelana neeseti ezimbini zeSULLAIR American 600RH isiguquli somoya, ngoxinzelelo olusebenzayo lwe-1.7 Ukufuduka komphefumlo kunye nomoya oyi-17m3. Inokusebenza okuphezulu kokusebenza, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ulwakhiwo olulula loomatshini, ukusebenza ngokukuko kunye nolawulo, olunokuthi luhlengahlengise ulawulo lweeparitha zokomba ngexesha lokwenyani, kwaye ukusebenza kwalo kunye nokusebenza kwazo kunokuhlangabezana neemfuno zeprojekthi.
I-SWMC 370 yomatshini wokugrumba wensimbi ngumatshini wokubhola wokusebenza ophezulu, ukubonelela ngokusebenza okuphezulu, ukuthembeka okuphezulu kunye noomatshini bokugrumba abasebenza ngobuninzi besiseko sobunjineli.Kule projekthi, ukusetyenziswa komatshini wokugrumba isiseko se-SWMC 370, kukuphucula kakhulu ukusebenza kolwakhiwo.
Ngenxa yeliwa ngokusisiseko umthamo ophukileyo, endaweni yokuguba okuphukileyo, kudityaniswe nesantya sokukhupha i-slag ephezulu, ezantsi emngxunyeni ococekileyo, akukho nto iphindaphindayo, ke umatshini wokugrumba we-SWMC 370, unokusebenza kokomba okuphezulu kunye nenqanaba lokusetyenziswa kwamandla kunokuba ujikeleze ngokubanzi kusombiwa.
Ukubholwa kwe-SWMC 370 kunokugqibezela imingxunya yokomba esemgangathweni, ngenxa yempembelelo ye-hydraulic ye-DTH yomngxunya osezantsi, ixesha elihamba rhoqo lamatye lifutshane kakhulu, i-rock rock eqinile etshintsha ifuthe kwimpembelelo yokuchana ayisiyonto inkulu, akukho lula ukuyila torque yokuphambuka kancinci Ngenxa yoko isantya sokujikeleza esiphantsi kwesixhobo sokubhola, ithuba lokungqubana phakathi kwesixhobo sokugrumba kunye nodonga lomngxunya kuncitshisiwe, ke akukho lula ukuba udonga lomngxunya luwe kunye nezinye iingozi.
Umatshini wokugrumba we-SWMC 370 we-subsurface wanconywa ngumbutho wokwakha kule projekthi ngenxa yeenzuzo zayo ezinje ngonxibelelwano olulula, ulwakhiwo olulula, uxinzelelo olucacileyo kunye nexesha elifutshane lokwakha. Okwangoku Isetyenziswa ngokubanzi ekwakheni iiprojekthi zokwakha.